ဖတ်မိသူတိုင်း ဖခင်မေတ္တာအပြည့်အဝကိုခံစားရစေနိုင်ပြီး တန်ဖိုးရှိတဲ့စကားလေးကို သမီးလေးအတွက်ရေးသားလာတဲ့ ဆန်းသစ်လရဲ့ ခင်ပွန်း - TGI Daily News
ချစ်ရတဲ့ ပရိသတ်ကြီးရေ… အဆိုတော် သရုပ်ဆောင် ဆန်းသစ်လကတော့ သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ အလိုလိုက်ဂရုစိုက်မှုတွေကြောင့် တစ်နေတခြား အလှတွေပိုတိုးလာတဲ့ ဆန်းသစ်လက မကြာသေးမီအချိန်ကမှ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သမီးလေးကို မွေးဖွားထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုဆိုရင် သမီးလေးက ရက်၂၀ပြည့်သွားခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့မှာတော့ ဆန်းသစ်လရဲ့ ခင်ပွန်းက သမီးလေးအတွက် တန်ဖိုးရှိတဲ့ စကားလေးတွေကို သူရဲ့ လူမှုကွန်ယက် ဆိုရှယ်မီဒီယာထက်မှာ ရေးသားမျှဝေလာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ” သမီးမွေးတဲ့နေ့ကစပြီး အဖေတစ်ရက်မှ အိပ်ရေးဝဝမအိပ်ခဲ့ရပေ့မယ် ငြိုငြင်မိတဲ့ စိတ်တစ်စုံတစ်ရာတောင် မခံစားရဘူးသမီးရေ သမီးပါးချိုင့်ရေးရေးလေး နဲ့ နှုတ်ခမ်းကွေးကွေးလေး တွေကိုမြင်လိုက်တိုင်း အလိုလိုပြုံးမိပြီး အားတွေပြည့်ခဲ့ရတာပါ ဘဝရဲ့အကောင်းမွန်ဆုံးအခိုက်အတန့်ကိုရွေးချယ်ပါဆို
သမီးအဖေ့ဘဝထဲရောက်လာတဲ့ အချိန်လို့ပဲဘယ်အချိန်မေးမေး ဖြေမိမှာပါ သမီးဘဝ မှာ အကောင်းဆုံးဆိုတာတွေနဲ့ပဲတွေ့ရအောင် တက်နိုင်သမျှလောကဓံဆိုတာကြီး လျော့နိုင်သမျှ လျော့အောင် ဒီအဖေရှိသမျှအင်အားနဲ့ကြိုးစားပေးမယ်နော် ရာသီဥတု ဒဏ်တွေခံပေးမယ့် အိမ်ခေါင်မိုးကြီးလို အန္တာရာယ်တွေကာကွယ်ပေးမယ့် ကျောက်နံရံကြီး လို… သမီးရဲ့Body guard ကြီး ,သမီးရဲ့ စစ်သူကြီးပေါ့ အဲ့လို မျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်းလေးနဲ့ ဒီအဖေကိုတစ်သက်လုံးကြည့်ပါနော်…ဖေဖေချစ်မဝလို့ပါ Love you သမီးလေး 20 Days ” ဆိုတဲ့ စာသားလေးအပြင် သားအဖနှစ်ယောက်ရဲ့ ကြည်နူးစရာပုံလေးကိုလည်း တင်ပေးလာတာ ဖြစ်လို့ ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်…. ။
Photo credit – Win Myat
ဖတျမိသူတိုငျး ဖခငျမတ်ေတာအပွညျ့အဝကိုခံစားရစနေိုငျပွီး တနျဖိုးရှိတဲ့စကားလေးကို သမီးလေးအတှကျရေးသားလာတဲ့ ဆနျးသဈလရဲ့ ခငျပှနျး
ခဈြရတဲ့ ပရိသတျကွီးရေ… အဆိုတျော သရုပျဆောငျ ဆနျးသဈလကတော့ သာယာပြျောရှငျတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ပိုငျဆိုငျထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ ။ ခငျပှနျးသညျရဲ့ အလိုလိုကျဂရုစိုကျမှုတှကွေောငျ့ တဈနတေခွား အလှတှပေိုတိုးလာတဲ့ ဆနျးသဈလက မကွာသေးမီအခြိနျကမှ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ သမီးလေးကို မှေးဖှားထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ယခုဆိုရငျ သမီးလေးက ရကျ၂၀ပွညျ့သှားခဲ့ပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။
ယနမှေ့ာတော့ ဆနျးသဈလရဲ့ ခငျပှနျးက သမီးလေးအတှကျ တနျဖိုးရှိတဲ့ စကားလေးတှကေို သူရဲ့ လူမှုကှနျယကျ ဆိုရှယျမီဒီယာထကျမှာ ရေးသားမြှဝလောခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ” သမီးမှေးတဲ့နကေ့စပွီး အဖတေဈရကျမှ အိပျရေးဝဝမအိပျခဲ့ရပမေ့ယျ ငွိုငွငျမိတဲ့ စိတျတဈစုံတဈရာတောငျ မခံစားရဘူးသမီးရေ သမီးပါးခြိုငျ့ရေးရေးလေး နဲ့ နှုတျခမျးကှေးကှေးလေး တှကေိုမွငျလိုကျတိုငျး အလိုလိုပွုံးမိပွီး အားတှပွေညျ့ခဲ့ရတာပါ ဘဝရဲ့အကောငျးမှနျဆုံးအခိုကျအတနျ့ကိုရှေးခယျြပါဆို
သမီးအဖဘေ့ဝထဲရောကျလာတဲ့ အခြိနျလို့ပဲဘယျအခြိနျမေးမေး ဖွမေိမှာပါ သမီးဘဝ မှာ အကောငျးဆုံးဆိုတာတှနေဲ့ပဲတှရေ့အောငျ တကျနိုငျသမြှလောကဓံဆိုတာကွီး လြော့နိုငျသမြှ လြော့အောငျ ဒီအဖရှေိသမြှအငျအားနဲ့ကွိုးစားပေးမယျနျော ရာသီဥတု ဒဏျတှခေံပေးမယျ့ အိမျခေါငျမိုးကွီးလို အန်တာရာယျတှကောကှယျပေးမယျ့ ကြောကျနံရံကွီး လို… သမီးရဲ့Body guard ကွီး ,သမီးရဲ့ စဈသူကွီးပေါ့ အဲ့လို မကျြလုံးဝိုငျးဝိုငျးလေးနဲ့ ဒီအဖကေိုတဈသကျလုံးကွညျ့ပါနျော…ဖဖေခေဈြမဝလို့ပါ Love you သမီးလေး 20 Days ” ဆိုတဲ့ စာသားလေးအပွငျ သားအဖနှဈယောကျရဲ့ ကွညျနူးစရာပုံလေးကိုလညျး တငျပေးလာတာ ဖွဈလို့ ပွနျလညျတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျနျော…. ။